I-'Chucky 'Series Teaser Ibuyisa Unodoli Emuva Kwezimpande Zayo Zangempela (Zibomvu)
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo I-'Chucky 'Series Teaser Ibuyisa Unodoli Emuva Kwezimpande Zayo Zangempela (Zibomvu)
Izindaba Zokuzijabulisa EzesabekayoUchungechunge LwesabekayoI-trailer (i-movie)
by UTimothy Rawles July 16, 2021
Lawo mehlo aluhlaza okwesibhakabhaka — leso siginesha siyahleka; okwangempela Chucky ibuyile ochungechungeni olusha lwegama elifanayo le-SYFY futhi le teaser ethokozisayo isanda kwehla namhlanje!
Ithoyizi elijwayele ukubulala elibomvu liphinde lenze umonakalo kubantu, futhi emhlabeni owethusayo lokho kuyizindaba ezinkulu ezinikezwe lonke ithalente elingemuva kochungechunge; uthola umdali woqobo uDon Mancini kanye neqembu lakhe alithandayo labalingisi – abanye bethandana kakhulu emuva kwasekuqaleni. Lokhu kufaka phakathi uJennifer Tilly, uFiona Dourif, u-Alex Vincent, uChristine Elise, kanye nezwi elingemuva kwehlazo uBrad Dourif.
Abafikayo uLexa Doig (Jason X) noDevon Sawa (Indawo Yokugcina) ukuqoqa abadlali besizukulwane esisha sabalandeli.
"Umlingiswa ophambili umfana oneminyaka engu-14 ubudala oyisitabane ohlukunyezwayo nohlobo olulahlekile ngemuva kokushona kukanina kamuva nje," kusho uMancini utshele i-EW. “Ungumculi osemncane [owenza] izithombe ezinezingxenye zonodoli. Uthola uChucky lapho kudayiswa khona amagceke bese emthenga, kodwa kuvela ukuthi uthola okuningi kakhulu kunalokho abebebhekele kona. ”
UMancini ubesebenza kanzima enza lolu chungechunge ngisho nangobhadane. Kubukeka sengathi kulokhu ushayela i-aura yangempela ye-franchise ngokunikeza uChucky i-sidekick encane. Yize, ngokungafani neyokuqala lapho uChucky adlala khona nengane eneminyaka eyisithupha, kulokhu uGen Z-er (Arthur) onenkinga udlala ukuzivikela.
UMancini uyanezela: “Enye yezinto ebengifuna ukuyenza ukubuyisela [ilungelo lobunikazi] kulo Izingane zokudlala izimpande futhi babe nabalingiswa abaphambili babe izingane. Kepha njengoba, ngamabhayisikobho ambalwa okuqala, besivele sinqume ukuba nezingane ezincane ebengifuna ukuzihlola ngokuhlukile, ngakho-ke kulokhu sihlola intsha esencane. ”
UTee Briones, Alyvia Alyn Lind, noBjörgvin Arnarson nabo bayalingisa.
Uma ucabanga ukuthi uChucky ubukeka ejwayelekile, iso elihle! Isikhunta sedoli sithathwa ngqo kusuka ku Ukudlala Komntwana 2. Lolu chungechunge olusha luzoqala ukukhonjiswa esiteshini SYFY kusuka ngo-Okthoba 12, 2021, futhi luzoqukatha iziqephu eziyi-8.
UMancini uthi uma lo mdlalo uphumelela kuzoba nezinkathi eziningi ezizayo.
Bheka i-teaser engezansi bese uqhubeka nokulandela i-iHorror ukuthola eminye imininingwane ngalolu chungechunge olusha olumnandi lwama-horror.
Isithombe seheda sithathwe ku-EW.com.
'I-Fear Street Ingxenye 3: 1666' Iletha i-Trilogy ku-Shaky, Close Close